Akwụkwọ nri na batter
Ngwakọta nke ihe ọ bụla e ghere eghe na batter na-akpọ tempura. Achịcha a si n'Eshia bịakwute anyị, ndị Russia nọkwa na-atọ ụtọ nke ukwuu. O doro anya na a ka ga-abụ azụ, mana ndị nna anyị nwanyị na-esi nri na-enweghị ya. Ka anyị lelee ntụziaka ole na ole maka nri nri na batter.
Tomato na batter
nnu, ose oji, pasili elu - nụrụ ụtọ;
mmanụ nri maka frying.
Mbụ, anyị ga-akwadebe ihe oriri niile iche iche. Anyị na-ewere chiiz ma debe ya na obere grater. A na-agbajuru akwa n'ime nnukwu efere ọzọ, gbakwunye Mayonezi ma jiri nwayọọ hichaa. Anyị na-etinye nchịkọta akwa mmanụ, ntụ ọka, nnu na ose nụrụ ụtọ. Anyị na-agwakọta ihe niile nke ọma, ụrọ anyị dị njikere. Ugbu a, anyị na-ewe tomato, nke m, anyị jupụta na mmiri esi mmiri ma jiri nlezianya kpochapụ anụ ahụ na ha. Anụ anụ ahụ n'ime mgbaaka ihe dị ka 1 cm n'obosara. Anyị na-etinye ite frying na stovu ahụ, wụsa mmanụ oriri ma mee ka ọ dị ọkụ. A na-eji nwayọọ na-agbanye tomato ọ bụla na batter ma ghee ya na tebụl frying na abụọ. Anyị na-etinye tomato na batter na efere mara mma na icho mma na pasili sprigs.
Eggplants na-agba na tomato
eggplant - 1 ibe;
Mayonezi - 100 g;
Eggplant m na bee n'ime mkpa Mpekere. Anyị na-etinye na efere miri na nnu, nke mere na ilu na-esi na ha pụta. Enweghi oge, mebie àkwá, nnu na whisk ruo mgbe ụfụfụ lush. Tinye ntụ ọka, nke mere na ụrọ adịghị oke oke. Eggplants na-amanye site na ihe ọṅụṅụ, tinye n'ime batter na ighe si n'akụkụ abụọ na pan frying. Mgbe ahụ, anyị na-ewegharị wheel, griiz na Mayonezi, anyị na-etinye otu iberibe tomato n'elu ma kpuchie ya na eggplant nke abụọ. Aubergines na batter na tomato dị njikere.
Salad si n'obi
Salo na Ukraine - Ezi ntụziaka
Omelette na broccoli
Salad nke kabeeji - echiche 8 maka nri nri nri
Ndị na-achọgharị n'ụlọ
Site na isi salmon
Minely anụ bekee - uzommeputa
Pellets na-ekoghị eko
Ọbọgwụ na mmanụ aṅụ
Bechamel sauce maka lasagna
Ndị na-anụ ọkụ na burger
Ndị na-asọpụrụ azụ azụ azụ n'ụlọ
Ero ofe na ọhụrụ mushrooms
Cutlets si azụ azụ - ihe ndị kasị atọ ụtọ ma dị mfe maka nri dị ọkụ
Katy Perry rịọrọ mgbaghara n'ihu Taylor Swift
Arbor na aka ya
Uwe Akpụkpọ anụ Ụmụaka 2013
Osisi na chrysolite - 30 foto nke mara mma ọla ntị na natural chrysolite
Onye na-eto eto ntutu anya
Ụbọchị izu ụka - ebee ga-eso nwa ahụ gaa?
Nri mgbede - otu esi ahọrọ agba, ịke, imewe?
White uwe akwa uwe
Ejiri odo odo 2014
Nebulizer ma ọ bụ inhaler - nke ka mma?
Ọrịa nje Antine
35 nke obere anụ ọhịa Volochkova si "usoro ihere"!
Mbufụt nke ngwa - ọgwụgwọ
Melon na ọnwụ ọnwụ
Kedu esi ewepụ isi si n'ọnụ?
Ogwu mmuta - Mgbaàmà na ihe ịrịba ama
Ngwurugwu carbohydrates - ngwaahịa
Ottoman-bed na-eweli usoro
Nri achịcha cherry
Ọgwụgwọ nke H1N1 influenza